Muxuu yahay heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray Garoowe? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Muxuu yahay heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray Garoowe?
Muxuu yahay heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray Garoowe?
Dowladda dhexe ee federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo shir maamlmo qaatay ku yeeshay magaalado Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ku aadan waxbarashada.
Previous articleKENYA oo shaacisay inay duqeyn ku dishay xubno Shabaab ah
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Buulo-Burte iyo HirShabele oo talaab qaaday